Kedu ihe ngwa HiCare maka ekwentị Huawei? | Gam akporosis
Kedu ihe ngwa HiCare maka ekwentị Huawei?
Nerea Pereira | | Ngwa gam akporo, HTC
Imirikiti ekwentị ha na-eji ngwa na-abịa nwaafọ. Nsogbu bụ na, gịnị mere na-agọnarị ya, ọtụtụ oge anyị na-adịghị ntị ya. Na anyị nwere ihe atụ na HiCare, ngwa dị na ekwentị Huawei niile na nke ahụ nwere arụmọrụ dị ịtụnanya.
Karịa ihe ọ bụla n'ihi na HiCare Ọ na-arụ ọrụ dị ka ebe nkwado, na-egosi ụdị nhọrọ niile ka anyị wee nwee ike ilekọta ekwentị anyị karịa mgbe ọ bụla.
Ọrụ ndị bụ isi nke Huawei HiCare nwere
Kwuo na ngwa a mepụtara site na Huawei ka ị nwee ebe enyemaka na - akwado ekwentị gị. Ọzọkwa, ọbụlagodi na ịnweghị ya arụnyere nwa afọ, ọ bụrụ na ọnụ gị nwere EMUI 4.1 ma ọ bụ karịa, ị nwere ike ibudata ya na google ngwa ahịa.
Developer: Ọrụ Internetntanetị Huawei
N'ime ọrụ dị iche iche HiCare na-enye, anyị nwere ike ịnụ ụtọ ọrụ ọrụ mpaghara, nkwado n'ịntanetị maka nsogbu ngwaike na ngwanrọ, tinyere ikike ibudata mmelite ngwanrọ. Ee, ị nwere ike ịmanye ọnụ gị iji melite site na iji ngwá ọrụ a.
N'aka nke ọzọ, site na nhọrọ «Iwu nkwa“Anyị nwere ike ịchọpụta otu sistemụ azụmaahịa Huawei si arụ ọrụ na mpaghara ọ bụla. Ga-ahụkwa akwụkwọ ntuziaka ndị ọrụ maka ekwentị gị na ọbụlagodi ebe anyị nwere ike iweta ajụjụ anyị metụtara ekwentị.
Na ihe banyere «Nyocha ekwentị«, Otu n’ime ihe ndị kasị akpali ngwaọrụ. Karịa ihe ọ bụla n'ihi na, site na ọrụ HiCare a, anyị nwere ike ịnwe nchoputa nke ọdịda ga-ekwe omume nke sistemu nke ọnụ anyị. Anyị nwedịrị ike ịgbanwe ngbanwe n'ụdị ọkwa mgbe ihe anaghị arụ ọrụ otu o kwesiri. Ma ọ bụ n'ihi na GPS ada ma ọ bụ batrị na-agbapụta ngwa ngwa karịa ka ọ na-adị, HiCare ga-echebara nke a echiche ma gwa anyị ka anyị wee nwee ike ịme ihe kwesịrị ekwesị.
Anyị enweghị ike ichefu "Ọnọdụ mmezi", ngwa ọrụ ga-ahụ maka izobe data nkeonwe anyị niile ka ndị ọzọ ghara ịhụ ha. Dị ka ị hụworo, Ọrụ HiCare Na ekwentị Huawei ọ karịrị nkwa, yabụ ọ bụ ngwa ọrụ ị kwesịrị iji, ebe ọ nwere ike ịzọpụta gị na nsogbu karịrị otu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » HTC » Kedu ihe ngwa HiCare maka ekwentị Huawei?
Sọpụrụ 9X Pro nyochaa